बिहे गर्ने उमेरको मेरो दाइको म’ला’मी म कसरी जाउँ ? महान चेली सदिक्षाको पी,डा (भिडियो) – Namaste Host
February 24, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिहे गर्ने उमेरको मेरो दाइको म’ला’मी म कसरी जाउँ ? महान चेली सदिक्षाको पी,डा (भिडियो)
गत पुस ५ गते म,ृत फेला परेका उर्लाबारी ६ का ३१ वर्षीय युवा प्रवीण बास्तोलाको ह,त्या भएको भन्दै मृतकका परिबार आन्दोलित बनेका छन् । आइतबार प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाएपछि आज पुन उनीहरू प्रहरी कार्यालय अगाडी प्र,द,र्शन र ना,रा,बा,जी गरिरहेका छन् ।
अहिले पनि मृ,त,कका आफन्त तथा छिमेकीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी अगाडी प्रदर्शन र ना,रा,बा,जी गरिरहेका छन् । अहिले केहिबेरमा मृ,त,क,का परिवार तथा आफन्तसँग प्रहरीले छलफल गर्न लागेको छ । भिडियो हेर्नुहोस्: